Taliyaha Booliska oo kormeeray Xarunta Oto-oto | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Taliyaha Booliska oo kormeeray Xarunta Oto-oto
Taliyaha Booliska oo kormeeray Xarunta Oto-oto
Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed Sareeye guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko ayaa maanta kormeeray Xaruntii isgaarsiinta Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee la oron jiray OTO OTO oo astaan ay u tahay (888), halkaasi oo dib u dayactir lagu sameeyey.
Taliyaha ayaa mid mid u kormeeray qeybaha ay ka kooban tahay Xaruntaan waxaana warbixin buuxda dayactirka lagu sameeyey xarunta 888 ka siiyey maamulka xaruntaasi.
Sarreeye guuto Bashiir Cabdi Maxamed Ameeriko Taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay in Taliska uu diyaariyey qorsheyaal dib loogu dayactirayo Xarumihii Ciidanka Booliska uu lahaa ee ku burburay dagaaladii kala duwanaa ee dalka ka dhacay.
Gen Bashiir ayaa xusay in dayactirka kadib dhowaan dib loo furi doono Xaruntii isgaarsiinta Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ee OTO OTO, waxaana uu xusay in la diyaariyey dhammaan qalabkii kala duwanaa ee xaruntaan ay ku shaqeyn laheyd.
Previous articleRa’iisul Wasaare Kheyre oo daah furay Barnaamijka Tirakoobka Shaqaalaha Rayidka ah ee Dowladda.
Next articleEng: Yariisoow oo kulan la qaatay Justin Duo Gore